Ngiba kanjani i-empath? - Mytika Speak
Ikhaya / Imizwa, okhiye nokubonakaliswa / Ngiba kanjani i-empath?
Ngiba kanjani i-empath?
Izinyanga 3 edlule
Ungafunda ukuba yi-empath ngokubheka izimo zabanye abantu bese ucabanga ukuthi kuzozwakala kanjani ukube ubunguye. Ekuqaleni, lo mcabango ungakuvumela ukuthi uzwe yingxenye yesipiliyoni sabo. Ngokuzijwayeza, uzokwazi ukuzwelana nempilo yabo yonke eholela kulo mzuzu ukuze uqonde kangcono ukuthi bazizwa kanjani ngempela.
Uma uqala kusukela ekuqaleni, kuyasiza ukuqala uzame ukuzwelana nabantu abangafani nawe. Isibonelo, uma ungumuntu odla imifino kuphela futhi ufuna ukuqonda umuntu odla inyama, ungaqala ngokuzwelana nesilwane esifuna ukudla isisulu saso ngoba sisesimweni saso. Lapho-ke, ubungacabanga ukuthi uqeqeshwe ngaleyo ndlela kusukela ebuntwaneni uma wawungumuntu. Ekugcineni ungaphetha ngokuthi esikhundleni sokwahlulela umuntu ngokudla inyama, ungazwelana naye ngoba kungazizwa kungokwemvelo kubo.
Lapho uzwela, awufuni ukubeka omubi omunye umuntu amandla kuwe. Leli iphutha elejwayelekile elenziwa iningi lama-empaths. Lapho othile ezwa noma yimaphi amandla ngokucace kakhulu, lawo mandla azinamathela kuye. Ukugwema lokhu, kubone ngombono womunye umuntu owaziyo noma omthandayo. Esibonelweni esingenhla, bekuvela ngombono wesilwane. Uma ngempela ungathandi muntu, khona-ke uzoba nobunzima bokuzwelana. Kufanele ukwazi ukuthanda abantu ngezinga elithile ukuze ukwazi ukuzwelana. I-empath yangempela iyazi ukuthi uma wazi noma ngubani kumongo wayo, kulula ukuwathanda. Baba indlela abayiyo ngezifundo ezazidinga ukuthi babe nokuhlangenwe nakho okuthile okubandakanya okungathandeki. Ngokuhlakanipha kuza ulwazi lokuthi ukuthanda umuntu akusho ukuthi kufanele ubathande noma ufune amandla abo okuzungezile, njengoba beqondiswa ekhaya ngendlela ebalungele.
Zama izicathulo zami,
ubone ukuthi ziyafaneleka yini,
bheka umhlaba wami,
usebenzisa izipho zakho.
Uma sishintshe izimpilo
impilo ibizoba njani?
Amathegiukuqonda empath ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya
Ngilakha kanjani ibhodi lokubona eliphumelelayo?
Uyini umsindo ophakeme kakhulu engihlala ngiwuzwa?
Ngingaphila kanjani manje?
Kungani umhlaba ubukeka umubi kangaka manje?
Ngazi kanjani ukuthi ngabe kukhona engikwaziyo ngokweqiniso?
Ngibhekisa kanjani ezulwini lami?
Ngabe sizalwe sinemikhawulo noma siyabalandela endleleni?
Ngingawasabalalisa kanjani amandla amahle?